မန်ယူအသင်း အိမ်ကွင်းမှာ ၃၈ ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ရယူနိုင်ခဲ့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး မန်ယူအသင်း အိမ်ကွင်းမှာ ၃၈ ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ရယူနိုင်ခဲ့
Manchester United's Dutch midfielder Daley Blind (C) celebrates with Manchester United's Armenian midfielder Henrikh Mkhitaryan (L) and Manchester United's English midfielder Scott McTominay (R) after scoring their second goal from the penalty spot during the UEFA Champions League Group A football match between Manchester United and Benfica at Old Trafford in Manchester, north west England on October 31, 2017. Manchester United won the game 2-0. / AFP PHOTO / Oli SCARFF (Photo credit should read OLI SCARFF/AFP/Getty Images)
မန်ယူအသင်း အိမ်ကွင်းမှာ ၃၈ ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိ စံချိန်ရယူနိုင်ခဲ့
မန်ယူအသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ၃၈ ပွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ စံချိန်သစ်တစ်ရပ်ကို တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူဟာ ဘင် ဖီကာကို အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အိမ်ကွင်းမှာ ၃၈ ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ စံချိန်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟိုဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ မန်ယူအသင်း နည်းပြအဖြစ် စတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီး သူတာဝန်ယူတဲ့ ကာလအတွင်း မန်ယူအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်မှာ အိမ်ကွင်း ရှုံးပွဲတစ်ပွဲသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူအသင်းဟာ နည်းပြမော်ရင်ဟို လက်ထက်အတွင်း အိမ်ကွင်းမှာ နိုင်ပွဲ ၂၇ ပွဲနဲ့ သရေပွဲ ၁၁ ပွဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၃၁ ညပိုင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်မှာ မန်ယူအသင်းက ဘင်ဖီကာကို ၂ ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရမှုကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်ရောက်ဖို့ သေချာနေပါတယ်။
မနျယူအသငျး အိမျကှငျးမှာ ၃၈ ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိ စံခြိနျရယူနိုငျခဲ့
မနျယူအသငျးဟာ အိမျကှငျးမှာ ၃၈ ပှဲ ဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့ စံခြိနျသဈတဈရပျကို တငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
မနျယူဟာ ဘငျ ဖီကာကို အိမျကှငျးမှာ အနိုငျရခဲ့ပွီးနောကျ အိမျကှငျးမှာ ၃၈ ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့ စံခြိနျကို ရယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မနျယူနညျးပွ မျောရငျဟိုဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ စကျတငျဘာမှာ မနျယူအသငျး နညျးပွအဖွဈ စတငျတာဝနျယူခဲ့ပွီး သူတာဝနျယူတဲ့ ကာလအတှငျး မနျယူအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲအရပျရပျမှာ အိမျကှငျး ရှုံးပှဲတဈပှဲသာ ရှိခဲ့ပါတယျ။
မနျယူအသငျးဟာ နညျးပွမျောရငျဟို လကျထကျအတှငျး အိမျကှငျးမှာ နိုငျပှဲ ၂၇ ပှဲနဲ့ သရပှေဲ ၁၁ ပှဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။ အောကျတိုဘာ ၃၁ ညပိုငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျမှာ မနျယူအသငျးက ဘငျဖီကာကို ၂ ဂိုးပွတျနဲ့ အနိုငျရမှုကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ရှုံးထှကျ အဆငျ့ကို တကျရောကျဖို့ သခြောနပေါတယျ။
Previous articleဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းအမှု ရည်ရွယ်ချက်မှန် ဖော်ထုတ်ရေး ဆက်လက်စစ်ဆေးနေ
Next articleရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းဟောင်းမှာ ကားတိုက်မှု ကျောင်းသား နှစ်ဦး သေဆုံး